Home Wararka Farmajo & Rooble oo dagaal ugu jira in Beesha Habar Gidir...
[Daawo] Farmajo & Rooble oo dagaal ugu jira in Beesha Habar Gidir xubin ku yeelato Aqalka Sare. Sababta?
RW Rooble iyo MW muddo xileedkiisa dhammaaday ayaa ka shaqeynaya in beesha Habar Gidir aay xubin ka hesho aqalka sare ee Gobolada Waqooyi. Farmaajo ayaa arrinta u wakiishay Guddoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Xaliima Ismaaciil (Xalimo Yarey) oo magaalada Muqdisho ka wadda shirar aay duubabka beesha Hawiye la rabo in la isaga horkeeno Somaliland.
Ujeedka Rooble ayaa MOL loo sheegay in yahay, haddii aay dhacdo in beesha Habar Gidir aay xubin ku yeelato aqalka sare gaar ahaan beesha Cayr, aay fursad siineyso in aanan lala tartamin Cabdi Qeybdiid oo halkaas aay beesha Sacad ku yeelato laba qof Aqalka Sare oo halkaa aay kursigeeda ku weyn doonto Jawaahir Axmed Cilmi oo Aqalka ku matasha beesha Cayr.
Siyaasiyiinta kasoo jeeda Gobolada Waqooyi/Somaliland garabka uu hoggaamiyo Cabdi Xaashi ayaa eedeyn kulul u jeediyey Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Kulan ay ahayd inuu Ra’iisal wasaaraha qabto oo la iskugu keeno labada dhinac ee ay kala hoggaamiyaan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Maxamed Guuleed, waxayna siyaasiyiinta kasoo jeeda Somaliland ku eedeeyeen Ra’iisal wasaaraha inuu dhinac u janjeero oo aanu daacad ka ahayn Doorashada xildhibaannada Waqooyiga.
Qoraal ay maanta soo saareen siyasiyiinta Garabka Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa loogu baaqay Ra’iisal wasaare Rooble inuu fuliyo balan qaadkiisii iyo gudashada mas’uuliyadii lagu aaminay, iyaga oo sidoo kale ugu baaqay in uu qabto kulan go’an mideysan looga garayo arrimahaan hoose ee taagan, kuwaas oo kala ah.
1- Mideynta guddoonka guddiga doorashooyinka Somaliland oo xaaladaha aanu kor ku soo sheegnay sababeen in uu kala jabo oo labo guddoon yeesho.
2- Habraacyada gaarka ah ee Doorashada Xildhibaanada labada aqal ee ka soojeeda Somaliland In laysla meel dhigo Goobta Doorashada iyo amnigeeda.
3- Maamulka Guud ee Doorashada iyo hagideeda.
4- In si qasab ah beesha Habar Gidir looga siiyo kursi aqalka sare, si loo badbaadiyo Cabdi Qeybdiid.
Previous articleAbiye Axmed oo isku diyaarinaya dagaal markale uu ku qaado Tigray
Next article[AKHRISO] Siyaasiyiinta Waqooyi oo ku eedeeyay Rooble in uu ka baxay dhexdhexaadnimada